Igwe igwe igwe, igwe kwụ ọtọ, kwụ, ndị na-emepụta ndị na-emepụta China
Ị nọ ebe a: Ulo1 / Universal vetikal kwụ igwe igwe - China Manufactur ...
AKW PRKW PRKW PRKW FORKW UNKW UNKWIVKWIVKWIVKW UNKW FORKW FORKW FORKW FORKW FORKW FORKWỌ FORLỌ
Tsinfa bụ ọkachamara soplaya & emeputa nke igwe ngwaọrụ na China. Nke a na usoro nke eluigwe na ala-igwe igwe bụ ihe nlereanya nke multifunctional igwe ngwaọrụ, na a nnọọ elu na-eri arụmọrụ. Ọrụ nke nhazi igwe dịkwa oke mma.
Si a price si ele ihe anya, mgbe ị na-azụ ihe a eluigwe na ala igwe igwe, Ẹkot na purchasezụ nke 4 di iche iche nke igwe igwe: a vetikal-egwe ọka igwe, a kwụ igwe milling igwe, a ebule ụdị igwe, a rotary isi-egwe ọka igwe nke-egwe ọka. nwere ike swivel 360 degrees, n'ụzọ dị irè belata gị ị nweta akwụ ụgwọ.In okwu nke arụmọrụ, tụnyere ndị nkịtị-egwe ọka igwe, usoro isiokwu a nke eluigwe na ala-egwe ọka igwe nwere mma rigidity na kwụsie ike, belata ihe ndị ọzọ.
Mme mbụme?Nye anyị oku na + 86-15318444939, ma gwa otu onye ọkachamara ọkachamara anyị okwu.I nwekwara ike dejupụta akwụkwọ ịkpọtụrụ anyị
Isi ọrụ iwebata:
Universal igwe igwe bụ igwe akụrụngwa na-egwe ọka cutter maka egwe ọka usoro. Ngwunye ahụ na-eme ka onye na-egwe ihe na-agagharị, na ihe nkedo na-eme ka ọrụ ahụ gaa na aka ekpe na aka nri, na ala, iji hazie ọdịdị achọrọ. Igwe igwe na-egwe ihe igwe ihe sara mbara nke ukwuu, nwere ike ịhazi ụgbọelu kwụ ọtọ, ụzọ kwụ ọtọ, ụzọ ụzọ, T-groove, groove, gear, spline shaft, sprocket, gburugburu gburugburu na ihe ndị ọzọ. Site rotary-egwe ọka isi, multi n'akuku machining nwere ike rụrụ. Mgbe a na-etinye ogwe osisi na-egweri ihe n'elu isi osisi, a pụkwara ịmegharị milling ahụ, a ga-ejikọkwa ọtụtụ ndị na-egbutu agụba agụba n'otu oge. Ọ dị ezigbo oru.
Igwe igwe na-egweri igwe maka ire ere, onyonyo, nkọwapụta:
Igwe igwe igwe Universal WN736
Okpokoro okpokoro （mm）: 1500 * 360
Isiokwu njem: 900 * 320 * 450
Main moto (kw): 4kw
Ntughari Swivel na isi awivel: ± 360 Celsius
Igwe igwe igwe Universal WN736A
Okpokoro okpokoro (mm): 1600 * 360
Isiokwu njem: 900 * 300 * 390
Swivel n'akuku na swivel isi: ± 360 Celsius
Igwe igwe igwe Universal WN736C
Isiokwu size (mm): 1600 * 320
Isiokwu okpokoro: 800 * 310 * 420
Main moto (kw): 7.5kw
Igwe igwe igwe Universal WN736D
Isiokwu nha (mm): 2000 * 400
Isiokwu okpokoro: 1200 * 315 * 385
Main moto (kw): 11kw
Igwe igwe igwe Universal XN26
Isiokwu size (mm): 1200 * 280
Isiokwu okpokoro: 650 * 200 * 450
Main moto (kw): 2.2kw
Igwe igwe igwe Universal XN32
Okpokoro okpokoro (mm): 1500 * 320
Isiokwu okpokoro: 800 * 300 * 450
Main moto (kw): 3kw
Vetikal igwe Machine
Okpokoro okpokoro (mm): 1270 * 254
X / Y / Z okpokoro njem (mm): 700 * 400 * 500
Swivel n'akuku na swivel isi: ± 45 Celsius
X / Y / Z okpokoro njem (mm): 900 * 300 * 350
Njirimara nke igwe igwe igwe:
Isi igwe na-egwe ọka nwere ike ịgbanye ogo 360
Igwe na-egwe ọka nwere ezigbo isi ike ma kwụsie ike
Abụọ - axis n'ibu cutter, akpaka oriri
Z-axis eletrik ebuli
Ngwa nhọrọ: eluigwe na ala indexing isi, rotary table, digital ngosi (DRO), kwụ igwe
Universal nkerisi isi na X axis na-eduga ịghasa nwere ike na-aghọta na linkage, ime ịghasa machining
Gịnị bụ eluigwe na ala-egwe ọka igwe? Akụkụ, Nhazi:
2 Nkwụ aka
3 Ihe eji arụ ọrụ
4 Universal rotary igwe isi
5 kwụ spindle
6 Speed mgbanwe njikwa
7 Vetikal kọlụm
Universal-igwe igwe mmepụta usoro （Quality akara）
1.Nyochaa ngwanrọ nwere oke njedebe sọftụwia dị iche iche, a na-enyocha ma hazie akụrụngwa akụrụngwa iji hụ na nkwụsi ike nke akụrụngwa.
A na-eme ọgwụgwọ na-eto eto iji kpochapụ nrụgide dị n'ime ma melite nkwụsi ike
3. Na-egwe ihe dị iche iche, na-agwụ ike igwe, na-egweri ụgbọelu na-arụ ọrụ na igwe na-egweri igwe, na-eji aka na-ehicha ma na-egweri njikọta nke ngwa igwe, na-achọpụta àgwà nke ihe ndị a zụrụ.
4.Makọta dị ka usoro nhazi usoro, ma tụọ ziri ezi na ngwaọrụ ndị eji atụ ihe
5.Linking ngwa eletriki na bọtịnụ ọrụ,
6.Mgbe na-emecha ule ọnwụ, na nha nha nke igwe dum
Otu esi arụ ọrụ igwe igwe igwe
Gbaa mbọ hụ na ntọala nke akụrụngwa igwe akụrụngwa na ọkwa. Lelee ma ike ọkọnọ na isi ike ọkọnọ nke akụrụngwa kwekọrọ, ma jikọọ ike ọkọnọ.
Lelee ma a na-ete mmanụ akụkụ ndị ahụ dị ka eserese mmanu na akara dị na akụrụngwa akụrụngwa.
Wụnye ngwa ọrụ ma jiri aka gị dozie ebe a na-arụ ọrụ na ọnọdụ achọrọ, Gbanwee isi igwe ahụ na akụkụ achọrọ. Tebụl ngụkọta oge n'akuku nwere ike zoo aka.
Usoro nnyefe nke spindle dị na ebule ahụ. Na aka ekpe ma ọ bụ aka nri nke ebule ahụ, e nwere ndị na-ebugharị ihe atọ. Speedgbanwe ọsọ, megharia mgbanwe levers nweta dị iche iche spindle ọsọ. Rịba ama: ọsọ ga-agbanwe mgbe igwe kwụsịrị.
Na igwe kwụ otu ebe, wụnye cutter n’elu spindle kwụ. Ejikwa igwe ahụ rụọ ọrụ igwe na-egbutu osisi na ihe mkpocha iji ghọta ọrụ ọrụ igwe.
Na-egwe ọka, gbalịa belata nghọta nke extrusion nke ebule na cutter. Mgbe ị na-egwe ọka mgbe ị mezigharịrị ọnọdụ ahụ, jidesie ụzọ abụọ niile na-akpụ akpụ ike na-adịghị mkpa ịkwaga (dị ka ebule ahụ, ogologo ụzọ na ụzọ ntụgharị) iji meziwanye isi ike nke igwe ahụ. Ike ijide mmadụ ekwesịghị ibu oke iji zere nrụrụ.
Igwe ahụ ejirila ọdụ ọdụ bọtịnụ. Ejiri ya na bọtịnụ mberede, nke enwere ike ịdata ozugbo ọnọdụ na-adịghị mma pụtara. Enwekwara mgba ọkụ na-amalite ike. Mgbe nchọpụta nsogbu, ịmalite ya ọzọ, buru ụzọ gbanye bọtịnụ mberede na elekere maka akụkụ iji tọgharịa ya, wee pịa ike ọkụ iji malite igwe.